कांग्रेसले तोड्यो माइतीघरको निषेधित क्षेत्र
डा.केसीको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन : पौडेल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले माइतीघर मण्डलाको निषेधित क्षेत्र तोडेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा बुधबार दिउँसो निषेधित क्षेत्र तोडिएको हो ।
प्रदर्शनकारीहरुले ‘डा.गोविन्द केसीको माग पूरा गर’, ‘गंगामायालाई न्याय दे’, ‘निषेधाज्ञा हटाइयोस्’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् । ठूलो संख्यामा रहेका प्रहरीको घेरा तोड्दै उनीहरुले माइतीघर मण्डलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारविरुद्ध चर्को नारावाजी गरे ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पौडेलले माइतीघर मण्डलामा आएर नागरिकले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ भन्नका लागि आफू ११ महिना जेल बसेको स्मरण गर्दै अहिलेको सरकारले नागरिकको अधिकार खोस्न खोजेको आरोप लगाए । “यो हाम्रो प्रारम्भ हो । आज हामीले सरकारले घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्र तोडेका छौं । सरकारले जहिलेसम्म निषेधित क्षेत्र खारेज गर्दैन, तोड्ने क्रम जारी रहन्छ,” उनले भने, “जहिले सत्याग्रह गर्ने व्यक्तिको अधिकारलाई सरकारले सुरक्षित गर्दैैन । जबसम्म सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण आवाज निर्वाध रुपमा उठाउने अवस्था बन्दैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।”
पौडेलले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनसनरत डा. गोविन्द केसीमाथि सरकारले अनावश्यक धरपकड गरेको भन्दै केसीको माग पूरा गर्न पनि सरकारसँग माग गरे । प्रदर्शनका क्रममा केहीबेर प्रहरी र आन्दोलनकारीबिच ठेलमठेल भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा कांग्रेसले सदन र सडकमा अब थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने पौडेलको भनाइ छ ।
नेविसंका महामन्त्री कुन्दन काफ्लेले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि जुम्लामा अनसनरत डा.गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न र छोराको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै अनसनरत गंगामाया अधिकारीको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।
कांग्रेसका ३ सांसद जुम्ला जाने
नेपाली कांग्रेसले डा.गोविन्द केसीको अवस्था बुझ्न ३ जना सांसद जुम्ला पठाउने भएको छ । चिकित्सा शिक्षा तथा सरकारका निषेधाज्ञालगायतका विषयलाई लिएर अनशनरत डा. केसीलाई कांग्रेसले ऐक्यबद्धता जनाउने प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सांसदहरु रंगमती शाही, दिनबन्धु श्रेष्ठ र प्रकाश रसाइलीलाई जुम्ला पठाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पनि कांग्रेससले सांसद पठाउने भएको छ । बैठकले मूल्यवृद्धि र निषेधित क्षेत्रको विषयमा पनि संसदमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधसमेत गर्ने खाँणले जानकारी दिए ।